Kalandarrada La Daabacayo: Maxaa Loo Adeegsadaa, Barnaamijyada iyo Naqshadaha Bilaashka ah | Hal -abuureyaasha Online
Jadwalka taariikhda si loo daabaco
Encarni Arcoya | | Khayraadka
Ma waxaad tahay qof u baahan inaad ilaaliso xakamaynta iyo abaabulka si waxyaalaha aad samaynayso oo dhan aanay kuugu dambayn ku quusin? Ma jeceshahay inaad ogaato waxa ay tahay inaad sameyso maalin kasta oo aad ku dhegto warqadda? Markaas waxaad u baahan tahay jadwalka daabacan. Iyagu waa aalad aad u badan, maadaama aad labadiinaba u adeegsan kartaan si aad u qorshaysaan hawlaha ay tahay inaad qabato shaqada iyo inaad qoyska oo dhan u abaabusho qorshe nadaafadeed guriga, ama xitaa go'aamiso meesha aad u aadayso usbuuca kasta carruurta ...
Haddii aan hore u soo jiidnay dareenkaaga, hoosta kuma siin doonno oo keliya naqshadaha jadwalka si aad u daabacdo, laakiin sidoo kale barnaamijyo aad adigu samaysan karto iyo sababaha ay tahay inaad u isticmaasho, iyo sida loo sameeyo, si inaanay ku ekaan wax jabin wax iyaga ku qoran. Aan yeelno?
1 Waa maxay sababta loo isticmaalo jadwalka taariikhda daabacan
2 Sida loo isticmaalo jadwalka jadwalka daabacan si aad naftaada si fiican isugu abaabusho
3 Barnaamijyada si aad u abuurto jadwalkaaga si aad u daabacdo
4 Naqshadaha jadwalka ee daabacan
4.1 Jadwalka usbuuca ee shaqada guriga (waxbarashada, shaqada guriga, iwm.)
4.2 Khadadka cirro 2022
4.3 Kalandarka Minimalist
4.4 Jadwalka Tooska ah
4.5 Jadwalka shaqada guriga, cuntada ...
Waa maxay sababta loo isticmaalo jadwalka taariikhda daabacan
Waqtigan xaadirka ah waxaa laga yaabaa inaad ku fekereyso in jadwalka daabacan ay yihiin wax la soo dhaafay. Halkii aad ka daabacan lahayd, oo aad sidaas ku khasaarin lahayd xaashiyaha waraaqaha, waxaad adeegsan kartaa ajendaha, moobilkaaga ama kombiyuutarka si aad u ilaaliso jadwalka, laakiin ma u arki lahayd si joogto ah? Waxay u badan tahay inaysan sidaas ahayn, maxaa yeelay buuggu had iyo jeer ma furnaan doono, oo taleefanka gacanta ama kombiyuutarku ma laha shaashadda oo leh jadwalka billaha, toddobaadlaha ama maalinlaha ah.
Si kale haddii loo dhigo, adiga oo aan arkin, waad illoobi doontaa oo kaliya haddii aad tahay qof mas'uul ah waxaad xoogga saari doontaa fulinta maalin kasta.
Waxaa jira astaamo iyo sababo badan oo dib loogu noqon karo adeegsiga jadwalka si aad u daabacdo sidii aad ahaan jirtay, shaqada iyo nolosha qoyska labadaba. Qaar ka mid ah waa:
Inaad awood u leedahay inaad isbuuca abaabusho wax kasta oo aad u baahan tahay inaad samayso. Maaha arrin buuxinta maalin kasta, maxaa yeelay waxaad sidoo kale u baahan tahay waqti naftaada, laakiin waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento wax soo saar badan adigoo og inaad leedahay waxyaalo aad qabato iyo inaad adigu u hoggaansamayso.
Waxaad ku qorsheyn kartaa shaqadaada internetka. Haddii aad leedahay blog, shabakadaha bulshada, iwm. Waxaad ku xaqiijin kartaa waxaad samayn doonto maalin kasta iyaga dhexdooda, si haddii, mar kasta oo aad u baahato inaad qabato shaqo, aad awooddo, maxaa yeelay maahan inaad ka fikirto waxaad samayn doontid maalin maalintii, laakiin wax walba waa la maareyn lahaa.
Waxaad xasuusan kartaa ballamaha caafimaadka, maalmaha dhalashada, safarada, waxqabadyada qoyska ...
Gebogebadii, jadwalka taariikhda daabacan ayaa waxtar u leh wax kasta oo maalin kasta ah. Waxaad heli kartaa mid shaqada guriga ah, mid kale shaqadaada, cuntada ... Xitaa haddii aad u aragto mid caadi ah, runtu waxay tahay in ururku kaa caawin doono inaad samayso waxa lagaa rabo inaad samayso (markaa waxaad heli doontaa wakhti badan oo firaaqo ah) .
Sida loo isticmaalo jadwalka jadwalka daabacan si aad naftaada si fiican isugu abaabusho
Bal qiyaas kalandarka kombiyuutarkaaga. Waa inaad furtaa mar kasta oo aad rabto inaad aragto waxaad samaynayso maalintaas, ama dhacdooyinka ama hawlaha aad qabato bisha oo dhan. Waxay ku lug leedahay haysashada kombiyuutar ama moobil si loo sameeyo. Laakiin markaad samayso oo aad xidho, waxaa laga yaabaa inaad illowdo hawshaas aad is -diiwaangelisay dhawr toddobaad ka hor.
Halkii, hadda ka feker mid aad daabacdo oo ku reeb qaboojiyaha. Mar kasta oo aad jikada aaddo oo aad marto aaggaas waxaad arki doontaa jadwalka, iyo wax kasta oo u baahan in la sameeyo maalintaas, toddobaadka ama bishaas. Waa a xusuusin joogta ah in ay jiraan waxyaabo ay tahay inaad samayso. Taasina waxay ka dhigaysaa mid aad u shaqeyneysa, maxaa yeelay, haddii aadan diidin kijada, mar walba way joogi doontaa inay kuu sheegto inaad u hoggaansamto.
Talooyinkayaga oo leh jadwalka taariikhda daabacan ayaa ah inaad ku daabacdo warqad. Iyada oo ku xidhan hawlaha ay tahay inaad qabato, waxaa fiican inaad qabato maalin kasta, toddobaadle ama bille, oo isku day inaadan isku darin hawlaha qaarkood kuwa kale. Tusaale ahaan, ha ku darin mowduucyada shaqada iyo kuwa cuntada qoyska, ama hawlaha mid walba guriga ku leeyahay. Xaaladahaas waxaa fiican inaad haysato kalandar arrin kasta.
Markaa waa inaad dhig meel dadka oo dhan si fiican u arki karaan, oo mar walba la arko. Ma aha oo kaliya inay u noqon doonto xusuusin, laakiin waxay kaloo noqon doontaa cadaab markaad ogaato inay tahay inaad u hoggaansanto oo aadan yeelin.
Barnaamijyada si aad u abuurto jadwalkaaga si aad u daabacdo
Xaqiiqdii, barnaamij kasta oo tafatirka sawirku wuxuu kaa caawin doonaa inaad samayso jadwalka la daabici karo, maadaama waxa kaliya oo ay tahay inaad samayso ay tahay inaad adigu naqshadayso. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan aad ugu fiicnayn naqshadeynta, ama aadan rabin inay noqoto mid aasaasi ah, ikhtiyaarka kale ayaa ah inaad isticmaasho websaydhyada iyo aaladaha leh qaab -dhismeedyo kuu oggolaanaya inaad abuurto jadwalkaaga oo leh saldhig.
Xaaladdan oo kale, dhammaan aaladahaani waa bilaash, oo waa inaad waqti yar ku qaadataa xulashada shaxanka ku habboon waxa aad rabto, habayso oo daabac.
Ma rabtaa inaad ogaato kuwa aad isticmaali karto? Shaah waxaan siinnaa liis ay ku qoran yihiin:
Freepik. Kani ma aha aalad lafteeda, laakiin halkii laga heli lahaa sheybaarada jadwalka si hadhow gacanta ama kombiyuutarka loogula shaqeeyo.
Naqshadaha jadwalka ee daabacan
Waxaa jira noocyo badan oo kalandarro ah oo lagu daabaco internetka. The inta badan habyaalada waa lacag la'aan, halka ay jiraan kuwo kale oo lacag la siinayo. Xaaladdan oo kale, waxaan diiradda saari doonnaa qaab -dhismeedka bilaashka ah. Oo waxaan ku talinaynaa kuwan soo socda:
Jadwalka usbuuca ee shaqada guriga (waxbarashada, shaqada guriga, iwm.)
Waa jadwal 12 bilood ah oo bil kasta leh tabyo si loo dejiyo hawlaha toddobaadlaha ah. Dhibaatadu waxay tahay in ay leedahay oo kaliya Isniinta ilaa Jimcaha, ma jiraan dhammaadka wiigga.
Waad kala soo bixi kartaa Halkan.
Khadadka cirro 2022
Kalandarkan sannadka soo socda wuxuu la imanayaa laba iyo toban bog, midna bil kasta oo sannadka ah. Waxaa loo habaynayaa sida ay wax u oggolaan karto qor qaar ka mid ah dulduleelada maalin kasta, laakiin aad uma badna ee maskaxda ku hay.
Tani waxay ka bilaabmaysaa 2021, laakiin hubaal 2022 ayaa wax yar la qori doonaa. Dhanka kale, adigoo aad u yar waxaad u adeegsan kartaa adeegsiyo badan, cuntada, ballamaha caafimaadka, shaqooyinka, waxbarashada, iwm.
Jadwalka Tooska ah
Tani waa ikhtiyaar kale. Hayso a ujeeddada ubaxa (ama leh waxyaalo laxiriira bisha ay matalayso) iyo godadka si, halkii aad u dhigi lahayd bogga si toos ah, waa inaad si toos ah u dhigtaa.
Jadwalka shaqada guriga, cuntada ...
Tani waa ikhtiyaarro badan, waana isku mid oo aad u isticmaali karto u go'aamiyo hawlaha guriga qof kasta oo qoyska ka tirsan (Waxaad ku kala saari kartaa midabka khad ee aad isticmaashid) iyo sidoo kale inaad qorshayso waxaad cuni doontid toddobaadka oo dhan.
Sida aad arki karto, waxaa jira fursado badan. Ma haysaa naqshado badan? Aan ogaano.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Jadwalka taariikhda si loo daabaco
Sida loo abuuro jaldiga hore iyo kan dambe ee buuggaaga